Apg29 isticmaalaa cookies.
By ka eegay apg29 ah oo ay isticmaalaan qaababka ay, aad ogolaato inaad isticmaalka cookies.
Apg29 isticmaalaa cookies. Cookies ee Swedish. Waa page ay si fiican iyo waayo-aragnimo user si fiican u shaqeeyaan.
Waxyaabaha kale, cookies foomka of comments inaad degaanka si ay u awoodaan si ay u badbaadiyaan magacaaga iyo e-mail sidaas ha u mar kasta oo aad ku qori a comment aan buuxin aad. Your email iyo magaca (ama magaca isticmaalaha) waxa lagu kaydiyaa database a si cad ma aha in dadweynaha. Kukiyada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu statistics Google.
Kukiyada waa files yar in ay ku kaydsan yihiin degaanka on your computer. Ma aha oo kibis ah oo aad cuni kartaa. ;) Waxaad sameyn kartaa in aad browser sida aad rabto in files kuwaas oo ay ka shaqeeyaan, haddii aad rabto ama ma. Dami si buuxda qalab sida uu yahay khatar ah in bogga aan shaqayn sidii loogu talagalay.
Labada kooxood ayaa ku
Sharciga on Electronic Communications bedelay July 1, 2011. Sannad ka hore, dowladda waxay yimaadeen iyagoo ah soo jeedinaya in xogta kaliya la raadsan karaa iyo lagu kaydiyaa qalabka terminal la oggolaansho user ee - horeba, users waa in la wargeliyo oo ku saabsan ujeedada cookies ah.
Ka hor waxa ay ahayd arrin ku filan in kaliya la wargeliyo macaamiisha macluumaadka in midkood laga soo ururiyey ama ku kaydsan ay computer - sharciga cookie, weli si Cutubka 6. § 18, kuma filna kaliya wargeliyo macaamiisha, hadda macaamiisha sidoo kale isku raaceen in ay macluumaadka soo baxey ama lagu kaydiyaa on qalabka ay. Buskudka, sharciga waxaa loogu talagalay in kor loogu qaado wacyiga waxa lagu kaydiyaa on ka mid ah computer.
Waxaad riix kartaa off banner info hoos ku saabsan cookies, riix "Waxaan fahamsanahay" iyo sii eegay apg29 ah.
Fadlan ila soo xiriir haddii aad qabto su'aalo ku saabsan ama ku qor faallooyinka ee hoose.
Waad ku mahadsan tahay booqashada site blog ah Apg29.Nu!